असाधारण खेलाडी, विवादित जिवनशैली - Khelpati
बिहिवार, मंसिर ११, २०७७ खेलपाटी संवाददाता
एजेन्सी । उनी उद्भुत थिए, असाधारण पनि । उनी थिए, डिएगो म्याराेडोना ।
उनी फुटबलका सबैभन्दा प्रतिभाशाली खेलाडी मध्य एक थिए । अर्जेन्टिनी म्याराेडोनासंग प्रतिभा, नजर र गतिको भण्डारनै थियो । जसबाट उनी आफ्ना प्रशंसकलाई मन्त्रमुग्ध गर्दर्थे ।
उनले आफ्नो विवादीत कदमबाट आफ्ना प्रशंसकलाई दुखी पनि बनाए । रिस पनि दिए ।
म्याराेडोनाले आफ्नो विवादीत ‘हेन्ड अफ गड्स’ गोलबाट सबैलाई चकित बनाए भने मैदान बाहिर ड्रग्स र नसालु पदार्थ लिने क्रममा पक्राउ पनि परे ।
उनको जन्म ६० वर्ष पहिले अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनस आयर्सको गरिब बस्तीमा भएको थियो । आफ्नो गरिबीसंग लड्दै युवा अवस्थासम्म उनी फुटबलका सुपरस्टार बनिसकेका थिए । केही मानिस उनलाई ब्राजिली महान खेलाडी पेले भन्दा पनि शानदार खेलाडी मान्छन् ।
म्याराेडोनाले कुल ४ सय ९१ खेलमा २ सय ५९ गोल गरेका छन् । एक सर्वेक्षणमा उनले पेलेलाई पछि पार्दै २० औं शताब्दिको सबैभन्दा महान फुटबलरको उपाधि आफ्नो नाममा लेखाएका छन् ।
यसपछि फिफाले मतको नियम परिवर्तन गर्दै दुवै खेलाडीलाई सम्मानित गरेको थियो ।
म्याराेडोना विलक्षण प्रतिभाका धनी थिए । सानैदेखि सबैको नजरमा आउन थालेका थिए । उनले १६ वर्षको उमेरमै अन्तराष्ट्रिय फुटबलमा पाईला राखे ।
होचो कद, मोटो शरिर, मात्र ५ फिट ५ इन्चको उचाई वाला म्याराेडोना कुनै सामान्य खेलाडी थिएनन् ।
म्याराेडोनासंग चतुराई, गति, तिक्ष्ण नजर, फुटबललाई आफुसंग राख्ने क्षमता र ड्रिब्लिङ्ग जस्ता विशेष गुण थिए ।
म्याराेडोनाले अर्जेन्टिनाका लागि कुल ९१ खेल खेले र कुल ३४ गोल गरे । तर उतार चढावले भरिएको उनको अन्तराष्ट्रिय करियरमा यो एक हिस्सा थियो ।
उनले अर्जेन्टिनालाई सन् १९८६ मा मेक्सिकोमा भएको विश्वकपको उपाधि जिताएका थिए । चार पटक प्रतियोगिताको फाईनलसम्म पुर्याए ।
सन् १९८६ को विश्वकपको क्वार्टरफाईनलमा म्याराेडोनाले केही यस्तो गरे, जसको चर्चा सधै हुनेछ ।
क्वार्टरफाईनलको खेल अर्जेन्टिना र इङ्ल्याण्डबीच रहेको थियो । दुवै देशबीच खेल अघिनै तनावपूर्ण थियो । किनकी ईङ्ल्याण्ड र अर्जेन्टिनाबीच चार वर्ष अघिमात्र फकल्याण्डको युद्ध भएको थियो ।
सन् १९८६ जुन २२ मा सास समेत रोक्ने खालको रोमाञ्चक खेलको ५१ मिनेट बितेको थियो । जसमा दुवै टिमबाट गोल हुन पाएको थिएन ।
यस समय म्याराेडोना विपक्षी टिमका गोलकिपर पिटर सिल्टनतिर अघि बढे र आफ्नो हातले फुटबललाई नेटभित्र हालिदिए । हातले छोएपछि गोल विवादमा आएको थियो ।
फुटबलको नियम अनुसार हातले छोएका कारण यो ‘फल’ मानिन्थ्यो । यसका लागि म्याराेडोनालाई पहेलो कार्ड देखाउनुपर्दथ्यो ।
तर त्यो समय भिडियो सहायता प्रविधि थिएन । रेफ्रीले यस गोललाई ठिकसंग देख्न पाएनन् । त्यसैले यसलाई गोल मानियो । योसंगै अर्जेन्टिना खेलमा १–० ले अघि बढ्यो ।
खेलपछि म्याराेडोनाले त्यो गोललाई थोरै आफ्नो टाउको र थोरै भगवानको हातबाट गरिएको बताएका थिए । यसपछि फुटबलको ईतिहासमा यस घटनालाई सधै ‘हेन्ड अफ गर्ड’को रुपमा लिईने गरिन्छ ।
यस विवादीत गोल गरेको चार मिनेटपछि म्याराेडोनाले केही यस्तो गरे, जसलाई ‘गोल अफ द सेन्चुरी’ अर्थात सताब्दिकै गोल मानिन्छ ।
उनले फुटबललाई ईङ्ल्याण्ड टिमका ५ खेलाडी र अन्तिमका गोलकिपर सिल्टनलाई समेत बिट गर्दै पोस्टको दिशा दिएका थिए ।
यस खेलको बारेमा म्याराेडोनाले भनेका थिए, ‘यो खेल जित्नु भन्दा यसको उद्धेश्य ईङ्ल्याण्डलाई विश्वकपबाट बाहिर गर्नुथियो ।’
ड्रग्स र रक्समा फसेका हिरो
म्याराेडोना बार्सिलोना र नापोली जस्ता चर्चित फुटबल क्लबका लागि खेलेका थिए । यिनी क्लबका हिरा मानिएका थिए । सन् १९८२ मा तीन मिलियन पाउण्डमा स्पेनको फुटबल क्लब र दुई वर्षपछि उनी ५ मिलियन पाउण्डमा ईटालीको क्लब नापोलीमा आबद्ध भएका थिए ।
जब म्याराेडोना हेलिकप्टरमा ईटालीको सान पाओलो स्टेडियम पुगेका थिए, त्यहाँ ८० हजार भन्दा बढी प्रशंसक आफ्ना स्टारलाई स्वागत गर्नका लागि उपस्थित थिए ।
उनले आफ्नो करियरको सबैभन्दा राम्रो फुटबल ईटालीमा खेले र उनलाई ईटालीका प्रशंसकबाट धेरै लोकप्रियता समेत मिल्यो ।
ईटालीमा म्याराेडोनालाई धेरै सम्मान मिल्यो । तर उनी यसबाट दिक्क भईसकेका थिए । एक पटक उनले भने, ‘यो निकै शानदार स्थान छ । त म यहाँ मुस्किलले सास लिन पाउँछु । म स्वतन्त्र भएर, बिना मतलब यता उता घुम्न चाहन्छु । म कुनै आम मानिस जस्तै हुँ ।’
यस बीचमा उनी कोकीनको लतमा गए । उनको नाम ईटालीको कुख्यात माफिया संगठन कैमोरासंग जोडिएको थियो ।
सन् १९९१ मा म्याराेडोनाको एक डोपिङ परिक्षणमा पोजेटिभ आएको थियो । उनलाई १५ महिना फुटबलबाट प्रतिबन्ध गरिएको थियो ।
यसपछि सन् १९९४ मा अमेरिकामा भएको फुटबल विश्वकपमा म्याराडोनालाई प्रतिबन्धित ड्रग एन्फेड्रिन लिएको पाईएको थियो । प्रतियोगिताको बिचैमा उनलाई प्रतिबन्ध लगाईएको थियो ।
तेस्रो पटक पोजेटिभ पाईएपछि म्याराडोनाले आफ्नो ३७ औं जन्म दिनमा व्यवसायीक फुटबलबाट सन्यास लिएका थिए । तरपनि विवाद र समस्याले उनलाई छाडेन ।
म्याराेडोनाले एक पटक पत्रकारलाई एयर राइफलबाट गोल समेत चलाए, जसबाट उनलाई दुई वर्ष १० महिनाको जेल सजाय सुनाईएको थियो ।
कोकीन र रक्सीको लतका कारण उनको स्वास्थ्यसंग जोडिएका धेरै समस्या आएका थिए । उनको तौल समेत निकै बढेको थियो । एक समय उनी १ सय २८ किलोसम्म पुगेका थिए । सन् २००४ मा उनलाई ह्दयघात भएको थियो, जसबाट उनी आईसीयूमा भर्ना हुन परेको थियो ।
मोटोपन घटाउनका लागि म्याराेडोनाले सल्यक्रिया समेत गर्न परेको थियो । यति मात्र नभएर ड्रग्सको लतबाट छुटकारा पाउनका लागि सहयोग समेत लिन परेको थियो ।
यि सबै विवाद र समस्याका बाबजुत म्याराेडोना सन् २००८ मा अर्जेन्टिनी फुटबल टिमको म्यानेजर बने । म्यानेजरको रुपमा उनलाई अरु धेरै भूमिका पनि मिल्यो ।
जसलाई लिएर मानिसहरु बीच मतान्तर समेत रह्यो । उनी विभिन्न कारणले चर्चामा भने रहि रहे ।
एक पटक कुकुरले उनलाई ओठमा टोकिदिएको थियो, जसका कारण उनलाई सल्यक्रिया समेत गर्न परेको थियो । म्याराेडोनाले विवाहपछि बनेको सम्बन्धका कारण जन्मिएका छोरा डिएगो अरमान्डो जुनियरलाई सार्वजनीक रुपमा स्विकार गरेका थिए ।
सन् २०१८ मा विश्वकप फुटबलमा अर्जेन्टिना र नाईजेरियाबीचको खेलको दौरान म्याराेडोनाको एक फोटो भाईरल बन्यो, यसबाट उनको अवस्था निकै बिग्रिएको देखिएको थियो ।
रुसमा उनले एक नाईजेरियाका प्रशंसकसंग डान्स गरेका थिए । खेल सुरु हुनु अघि आकाशतर्फ हेर्दै प्रार्थना गरे । मेस्सीको गोलमा खुसी मनाएका थिए । म्याचको दौरान उनी सुत्न पुगेका थिए र अर्जेन्टिनाले दोस्रो गोल गर्ने बित्तिकै बिचको औलाले 'सल्युट' गरेका थिए ।
केही रिपोर्टका अनुसार म्याराेडोनाले जिन्दगीको अन्तिम वर्षमा आफ्नो जिवनशैली सुधार गर्नका लागि उपचार गरिरहेका थिए । ह्दयघातकै कारण उनले बुधबार प्राण त्याग गरे ।
लिखित अनुमति बिना मिडियामा बोल्न राेक !
विश्व खेलकुद २०२१ का प्रमुख ठूला आकर्षण
विश्व खेलकुद : सन् २०२० लाई फर्केर हेर्दा
खेलकुदमा ओलीको शक्ति कति ?
अब कमरेड सिलवाल !
भलिबलसंग अरुणाको पहिलो प्रेम